RC Cars KOOWHEEL 1:16 Scale 2WD Off Road Remote Control Cars pamwe 2 Rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck chikara High Speed ​​Crawler USB Charger RC Car nokuda Vakuru uye Kids (Blue) - Jomo Technology Co., Ltd
RC Cars KOOWHEEL 1:16 Scale 2WD Off Road Remote Control Cars pamwe 2 Rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck chikara High Speed ​​Crawler USB Charger RC Car nokuda Vakuru uye Kids (Blue)
Chinogadzirisa Desert ngoro:
1:16 Scale, Independent kuturika, zvose Nzvimbo yenyu kuzvidzora, ichi RC kure kudzora motokari kubvumira kuti playing pamhenderekedzo, jecha, uswa uye chero unodawo.
Strong Anti chipingaidzo, hunoita mota akawanda kuti muchimhanya pamwe panguva uye nzvimbo. Kana wawana zvakawanda 2 KOOWHEEL Videocon rori, ndiko kunonakidza zvikuru kumhanya dzakawanda kure kuzvidzora motokari parutivi.
Koowheel motokari kuuya 2 mabhatiri, aigona kutsigira simba nokuda injini asvike pamusoro kumhanya 12 mph. The wakazara bhatiri aigona vakamhanya 10-15 mins. Recharging bhatiri Via USB pachiteshi, zvose unofanira kutanga vane 3 AA mabhatiri kuti wokutepfenyurisa!
Full basa kuzvidzora, mberi / harungashandurwi / kuruboshwe / zvakanaka. Ichi kure kuzvidzora Car ane yakatsiga zvikuru gozvo uye throttle, asi ergonomic kure aigona nechokwadi pevane masimba kuti mutsva.
KOOWHEEL anopa zvizere dzosera kana kuchinjana itsva imwe kuitira mukati kwemazuva 30. Free kugadzirwa uye kutsiva nenhumbi muna US kuti kuitira mukati kwemazuva 365. Akagadzirira Achipindura mumaawa 24. SO Wedzera CART NOW!
2.4G kure CONTROL CAR2.4 GHz redhiyo kudzorwa: simba Anti chipingaidzo, hunoita mota akawanda kuti muchimhanya pamwe panguva uye nzvimbo. Kana wawana zvakawanda 2 KOOWHEEL Videocon rori, ndiko kunonakidza zvikuru kumhanya motokari dzakawanda parutivi.
Tapota ona: 3 reasons below for short-driving-time of the battery :
The ndinorova nguva mupfupi kutsigira machisa.
Iwe hauna kumhanya kubva bhatiri vasati kuchaja.
The bhatiri upenyu vachapiwa kupfupisa kana usina akabvisa bhatiri kubva motokari mushure kushandiswa.
RC motokari x1
Rechargeable 6.4V / 700mAh bhatiri nokuda Car x2
USB mundiro x1
Previous: Koowheel K3 6.5 padiki Electric Hoverboard pamwe Makaralı Self vakadengezera Scooters nokuda Adult Kids
Next: RC Cars nokuti Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 Rotating 4WD Off Road Double vakatsigira Rotating Tumbling - 2.4Ghz High Speed ​​Rock Crawler Vehicle pamwe Headlights Children Birthday Zvipo RC Car nokuda Kids
Koowheel K3 6.5 padiki Electric Hoverboard pamwe B ...
Koowheel yemagetsi kuzviremekedza BALANCInG sikuta Rinoengerera ...
Koowheel L10-X 2019 itsva 8 padiki Lightweig ...
Koowheel Mini lightweight zvakachipa asi yakasimba Ele ...
Koowheel Patent Innovative mufashoni patani, e ...